Fiangonana nohavaozina - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fiangonana presbiteriana)
Ny Fiangonana nohavaozina dia fiangonana protestanta vokatry ny Fanavaozam-piangonana tamin' ny taonjato faha-16 izay nandray ny fampianaram-pinoan' ireo mpanavao fiangonana toa an' i Ulrich Zwingli sy indrindra i Jean Calvin. Fiangonana prôtestanta ny Fiangonana nohavaozina. Ampahany amin' ny fampianaran' i Lotera ihany no noraisiny. Tao Eorôpa dia fantatra tamin' ny anarana hoe "Fiangonana kalvinista" ny Fiangonana nohavaozina. Ny mpanoratra sasany amin' ny teny malagasy dia mampiasa ny hoe "Fiangonana réformé" na "Fiangonana reformé" na "Fiangonana reforme".
I Jean Calvin, taonjato faha-16.
1.1 Ny amin' ny fanasan' ny Tompo
1.2 Ny fahalalahan' ny Kristiana
2 Fielezany maneran-tany
Ny amin' ny fanasan' ny TompoHanova
Miavaka ny Fiangonana nohavaozina noho ny fiheverany ny amin' ny Fanasan' ny Tompo satria tsipahiny ny tenim-pinoana (na dôgma) momba ny fiovan' ny mofo ho tenan' i Jesoa sy ny divay ho ran' i Jesoa (fiovam-pisia-maha-izy na transsobstansiasiona; latina: transsubstantiatio) izay ampianarin' ny Fiangonana katôlika rômana. Tsipahiny koa ny amin' ny fikambanan' ny mofo amin' ny tenan' i Jesoa sy ny divay amin' ny ran' i Jesoa na konsobstansiasiona (latina: consubstantiatio) izay ampianarin' ny Fiangonana loterana araka ny hevitr' i Lotera. Amin' ny Fiangonana nohavaozina dia fahatsiarovana miendrika tandindona ny sakramentan' ny Fanasan' ny Tompo, noho izany dia tsy manatanteraka ny fombafomba sasany ataon' ny Loterana momba izany izy ireo, na dia prôtestanta aza.
Ny fahalalahan' ny KristianaHanova
Ny teôlôjian’ ny Fiangonana nohavaozina dia manamafy ny maha tsitoha (mahery indrindra) an' Andriamanitra, nefa izany dia tsy mifanohitra amin’ ny fahalalahan' ny Kristiana sy ny maha tompon' andraikitra azy. Satria mahafantatra ny tenany ho voavela heloka sy voavonjy ao amin' i Jesoa Kristy ny Kristiana, dia afaka mitondra ny fiainany amin' ny fomba hentitra sy tompon' andraikitra an-kalalahana, ka miaraka amin' izany ny fanamasinana isam-batan' olona sy ny fandraisana andraikitra eo amin' ny fiarahamonina. Izany toetra mihoa-draha ananan' Andriamanitra izany dia mametra ny fahefana rehetra mety hananan' ny olombelona, na amin' ny lafiny fivavahana izany na amin' ny lafiny pôlitika.
Miparitaka indrindra ao Soisa sy Ekôsy sy Nederlandy ary Frantsa ny Fiangonana nohavaozina. Hita ao Afrika Atsimo sy Kôrea Atsimo sy Kaledônia Vaovao sy Kebeka sy any amin' ny Pôlinezia Frantsay sns koa io Fiangonana io. Ao amin' ireo firenena anglô-saksôna dia atao hoe Fiangonana presbiteriana izy ireo araka ilay rafi-pitondram-piangonana nosafidiny (presbiterianisma). Fiangonana nohavaozina ny Fiangonan' i Jesoa Kristy eto Madagasikara.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiangonana_nohavaozina&oldid=1010417"
Dernière modification le 28 Martsa 2021, à 10:36
Voaova farany tamin'ny 28 Martsa 2021 amin'ny 10:36 ity pejy ity.